igumbi eliluhlaza ihostele33 edolophini
igumbi labucala elikhulu nelitofotofo, iibhedi ezingamawele, umgangatho weplanga, iphepha eludongeni, elikwiziko lembali lePonta Delgada, lilandela imithetho karhulumente kunye nokucebisa ngokhuseleko kunye nococeko, oluhlaziywa rhoqo ngexesha le-Covid-19 bhubhane.
kucetyiswa izibini okanye abahlobo
ihostele33 inika indawo yokuhlala etofotofo kwaye imnandi, enamagumbi amakhulu, anomoya kunye nemigangatho eyenziwe ngamaplanga kunye namagumbi okuhlambela abucala kunye nokwabelana. Ineholo yokungena, igumbi leTV, ipatio egqunyiweyo kunye nebalcony, ezihlala kunye neendawo zokwabelana. I-balcony inika umbono wesixeko kunye neentaba. Izidlo ezilula zinokulungiswa kwaye zonke izixhobo zasekhitshini ziyafumaneka. Iiti, ikofu kunye neekuki ziyafumaneka.
4.61 out of 5 stars from 331 reviews
4.61 · Izimvo eziyi-331
Ihostele33 ekwiDowtwon yasePonta Delgada kumgama wokuhamba ukuya kwiindawo zokutyela, iivenkile, iindawo ezinomtsalane, iigadi zeBotonical, iMyuziyam, iDyunivesithi, iMarina, umnenga kunye nehlengesi ukubukela, isikhephe sezikhephe, indawo yokuqubha, ulwandle (5km).
Izimvo eziyi-1 207
-Sibonelela ngeethayimthebhile zebhasi, iimephu, iincwadi zesikhokelo kunye naliphi na icebiso lokuhlala ukonwabela ngakumbi
Inombolo yomthetho: 313/AL
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ponta Delgada